Air Explorer uye Air Cluster: maviri asingazivikanwe maapplication aunofanirwa kuziva | Linux Addicts
Isaac | 21/05/2022 07:37 | Zvirongwa, Windows
Air Explorer uye Air Cluster iwo haawanikwe natively kuLinux, chete yeWindows uye macOS. Kana iwe uchida kuiisa mu distro yako unogona kuzviita neWINE, kunyangwe chinhu chakanaka ndechekuti ndeye Android nharembozha, izvi zvinovhurawo imwe mukana uye ndiko kuiisa nema emulators seGenymotion. Zvakanaka, asi ... ndezvipi zvikumbiro izvi chaizvo? Zvingashandisirwei? Zvakanaka, chokwadi ndechekuti iwo maviri asingazivikanwe kune vakawanda, asi anga achinyatsoita kwandiri kutamisa mafaera kubva kune rimwe gore rekuchengetera sevhisi kuenda kune rimwe.
Taura kuti Air Explorer inobvumidza iwe kuwiriranisa dhata kubva pakombuta yako yemuno uye uiise kune gore rekuchengetedza sevhisi (inotsigira akati wandei, kunyangwe NAS), kana iwe unogona zvakare kufambisa faira kana folda kubva kune rimwe gore kuenda kune rimwe. Semuenzaniso, fungidzira iwe uchipfuura folda kubva kuMEGA kuenda kuJottaCloud. Zvakanaka, ndizvo zvaunobatsirwa neAir Explorer. Uye zvakare, ine maneja anobvumidza iwe kumbomira, kutangazve, kutonga kwaunopfuudza zvirimo, uye iwe unogona kutosarudza rudzi rwekopi kana kuwiriranisa kwaunoda, senge kopi yakazara, chete mafaera akagadziridzwa kana iwo. izvo zvisisipo zvakare, etc.
Izvo maererano neAir Explorer, asi kune zvakare imwe budiriro yeiyi kambani yeEurope uye ndizvo software inonzi Air Cluster. Iyi imwe ichakuyeuchidza nezveiyo inozivikanwa LVM, uye kuti Mhepo Cluster ichakubatsira kubatanidza makore ako ese munzvimbo imwechete. Mune mamwe mazwi, fungidzira kuti une 50 GB muMEGA, 5 TB muJottaCloud, uye gumi nemashanu GB muGDrive, zvakanaka, neAir Cluster iwe uchakwanisa kuve nechepakati "senzvimbo imwe chete" kubata makore ako ese, kureva. , sekunge iwe une 15GB.
Kana iwe uchida zvaunoverenga pano uye uchida kushandisa izvi zvirongwa zviviri kuti zvive nyore kwauri kushanda nenzvimbo dzako dzekuchengetera, ipapo iwe unogona kuziva rumwe ruzivo uye kurodha software pano:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Air Explorer uye Mhepo Cluster: maviri asingazivikanwe maapplication aunofanirwa kuziva nezvawo
Casebook 1899: zita rine chitarisiko chekare uye zvakawanda zvakavanzika